စမ်းစမ်းတင် - ရဲဘော်သုံးကျိပ်ဝင် သမီးစာရေးဆရာမ သုံးယောက် - MoeMaKa Media
Home / Culture / Profile / San San Tin / စမ်းစမ်းတင် - ရဲဘော်သုံးကျိပ်ဝင် သမီးစာရေးဆရာမ သုံးယောက်
စမ်းစမ်းတင် - ရဲဘော်သုံးကျိပ်ဝင် သမီးစာရေးဆရာမ သုံးယောက်
Culture, Profile, San San Tin
Daw Hla Kyaw Zaw
(မိုးမခ) ဇန်နဝါရီ ၂၊ ၂၀၂၀
ရဲဘော်သုံးကျိပ်ဝင်တွေထဲ ဖခင်နံမည်နဲ့တွဲ အမည်မှည့်ထားတဲ့ သမီးတွေထဲက သုံးယောက်ဟာ စာရေးဆရာမတွေ ဖြစ်နေတာက တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်။ ရဲဘော်သုံးကျိပ်ဝင် ဗိုလ်အောင်ဆန်း၊ ဗိုလ်လကျ်ာနဲ့ ဗိုလ်ကျော်ဇောတို့ရဲ့ သမီး သုံးယောက်ပါ။ သုံးယောက်စလုံး… ခုဆို အသက် ၇၀ ကျော်တွေ။ သမီးတွေက- (ဒေါ်) အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ဒေါက်တာခင်လကျ်ာနဲ့ ဒေါက်တာလှကျော်ဇော။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က မောင်နှမသုံးယောက်မှာတဦးတည်းသော သမီးဖြစ်ပြီး ဒေါက်တာလှကျော်ဇောမှာ ဒေါ်စန်းကျော်ဇောနဲ့ ဒေါက်တာခင်လကျ်ာမှာ ဒေါ်ယုလကျ်ာဆိုတဲ့ ညီမတွေရှိပါတယ်။
ဒီစာရေးတဲ့လူ သုံးယောက်စလုံး. ကလောင်နံမည်မရှိ၊ နံမည်ရင်းနဲ့ ကလောင်နံမည်က တူတူ၊
ဒီသုံးယောက်မှာ နှစ်ယောက်က ဆရာဝန်တွေဆိုတော့ နံမည်မှာဒေါက်တာတပ်၊ ဒေါက်တာလှကျော်ဇောက အွန်လိုင်းကတင်မက မဂ္ဂဇင်းပါထုတ်ဝေတဲ့ မိုးမခက ပင်တိုင်ဆောင်းပါးရှင်။ ခုနောက်ပိုင်းမှာ ကလောင်နံမည်ကို လှကျော်ဇော လို့ရေးတာအတွေ့ များလာ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အင်္ဂလိပ်လိုရေးသားထုတ်ဝေတဲ့ စာအုပ်တွေမှာ ကလောင်နံမည်က အောင်ဆန်းစုကြည်။
(မြန်မာနိုင်ငံမှာက အားကစားသမား၊ ရုပ်ရှင်မင်းသမီးမင်းသား။ အဆိုတော်၊ ပန်းချီဆရာ၊ ကဗျာဆရာ၊ စာရေးဆရာတွေပဲ နံမည်ရှေ့ ဦး-ဒေါ်မတပ်ကြ၊ ဝင်းဦးကို ဝင်းဦးလို့ပဲ ခေါ်ခဲ့ကြတာ။ ဒီခေတ်မှ ရိုင်းတယ်ဆိုပြီး ဦးဝင်းဦးလုပ်ပစ်မှာ။ ရေကူးသမား တင်မောင်နီ။ ဘောလုံးသမား ဗဟာဒူး၊ လှဌေး။ ကီးလှတင်….မျိုးလှိုင်ဝင်း…. အောင်သူ… အဲဒိလိုပဲ ခေါ်ခဲ့တာ။ )
ရဲဘော်သုံးကျိပ်ဝင် သမီးသုံးယောက်စလုံး ခရစ်ယာန်သာသနာပြုကျောင်းထွက်တွေ။ ဗိုလ်အောင်ဆန်းနဲ့ ဗိုလ်လကျ်ာ သမီးနှစ်ယောက်က ခု ဒဂုံ-၁ လို့ သိကြတဲ့ အင်္ဂလိပ်မက်သဒစ် ကျောင်းသူတွေ။ ဗိုလ်ကျော်ဇော သမီးကတော့ ခု စမ်းချောင်း- ၂ ဖြစ်နေတဲ့ စိန့်ဖီလိုးမီးနားစ် ကွန်ဗင့် မိန်းကလေးများကျောင်းက။
ဒီကျောင်းတွေမှာ ကျောင်းအပ်ရင်… အင်္ဂလိပ်ဆရာမတွေ၊ ခရစ်ယာန်မယ်သီလတွေခေါ်ရလွယ်အောင် အင်္ဂလိပ်နံမည်ပေးပေမဲ့ ဒီ ရဲဘော်သုံးကျိပ်ဝင် သမီးတွေက အင်္ဂလိပ်နံမည်မထား။ ပြည်သူပိုင်မသိမ်းခင်၊ ပညာရေးစနစ်အားကောင်းချိန်မှာ ဒီကျောင်းတွေမှာ နေခဲ့ရတော့ အင်္ဂလိပ်စာ အဆင့်အတန်းက မြင့်။ မြန်မာစာလည်း မညံ့ကြ၊
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ သူ့ဘဝအဆိုးအကောင်းပြောင်းသွားမယ့် ရှစ်လေးလုံး အရေးတော်ပုံ မတိုင်ခင်မှာ ပါရဂူဘွဲ့စာတမ်းပြုစုဖို့ အချက်အလက် အကိုးအကားတွေ သုတေသန လုပ်ဖို့ ရန်ကုန်လာရင် စာရေးဆရာတွေနဲ့ တွေ့လေ့ရှိပါတယ်။ ဘိလပ်မှာနေပေမဲ့ မြန်မာစာ မြန်မာစကား ကျွမ်းလေသူလို့ ဆရာ​ြမသန်းတင့်က ပြောပြဖူးပါတယ်။
ဒေါက်တာလှကျော်ဇော ရန်ကုန်အိမ်က စမ်းချောင်းမှာ။ အိမ်နဲ့နီးတဲ့ စိန့်ဖီလိုးစ်မှာ အိုင်ယာလန်က လာတဲ့ ရိုမန်ကက်သလစ် မယ်သီလတွေနဲ့ စာသင်ရလို့ အင်္ဂလိပ်စာကောင်းပေမဲ့ မြန်မာစာလည်း မညံ့၊ သူတို့ခေတ်က မြန်မာစာဆရာမကြီး ဒေါ်မြတင်ကျေးဇူးနဲ့ မြန်မာစာလည်း ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ရေးနိုင်တဲ့ လူ။ နောက်..သူက မြန်မာစာဖတ်အားလည်းကောင်းလေသူ။
( ကြားဖြတ်စကား- ၁၉၆၂ မှာ တော်လှန်ရေးကောင်စီတက်လာတော့ မူလတန်း ကျောင်းသူ ကျောင်းသားတွေပဲ ကြူးနစ်၊ ဂါဝန်၊ဘောင်းဘီပဲ ဝတ်ခွင့်ရှိပြီး အလယ်တန်းရောက်တာနဲ့ လုံချည်ဝတ်ရမယ် အမိန့်ထုတ်တော့ စိန့် ဖီလိုးစ်ကျောင်းဝတ်စုံက အကျီ င်္ ပန်းရောင်နဲ့ လုံချည်က မီးခိုးရောင်ပြောင် လုပ်လိုက်ရရော။
အတန်းကြီးအစ်မတယောက်ပြောလို့ အဲဒါ ဒေါ်မြတင်ရွေးလိုက်တာတဲ့။ ပန်းရောင်ရွေးတာက ထိကရုန်းပန်းအရောင်မို့လို့တဲ့။ ထိရင်ရုန်းမယ့်သဘောရယ်၊ နောက်မှ အကျီ င်္ဖြူနဲ့ စိမ်းပြာရောင်မှာ ပန်းအဖြူထိုးထားတဲ့ လုံချည်ပြောင်းပြီး ကျောင်းလည်း ပြည်သူပိုင်သိမ်းလိုက်ရော အားလုံး အဖြူ အစိမ်းဝတ်ရရော- မဆိုင်တာထည့်ရရင်- ကြံံံ့ဖွံ့ကလည်း ဒီ ဒီဇိုင်းပဲနော်… ဘာ သဘောလဲ မသိ)
ဒေါက်တာခင်လကျ်ာနေတာက အင်းလျားလမ်း၊ သူ့အိမ်ဝန်းကျင်နဲ့ဒေါက်တာ လှကျော်ဇော ဝန်းကျင်က မတူ။ ဒါပေမဲ့ ဖခင်ချင်းက ဝန်းကျင်တူ၊ သမီးချင်းကလည်း ဆေးကျောင်းမှာ ဝန်းကျင်တူ။ ခုလည်း စာရေးတဲ့ ဝန်းကျင်ချင်းတူတူ။ ဒေါက်တာခင်လကျ်ာ ဘန်ကောက်မှာ ဆေးစစ်ဖို့သွားရင် တရုတ်နိုင်ငံရောက်နေတဲ့ ဒေါက်တာလှကျော်ဇောနဲ့ ဖုန်းပြောနေကျ၊ စိန့်ဖီလိုးစ် အတန်းတူတွေခေါ်သလို ဒေါက်တာလှကျော်ဇောကို ဒေါက်တာခင်လကျ်ာက လှလေးလို့ပဲ ခေါ်တာရယ်။
ဒေါက်တာခင်လကျ်ာ ငယ်ကတက်တဲ့ ကျောင်းကလည်း မြန်မာစာထက်အင်္ဂလိပ်စာတော်သူတွေ မွေးထုတ်တဲ့ ကျောင်း။ ဒါကြောင့် အလျဉ်းသင့်သလိုဖတ်ခွင့်ရတဲ့ စျေးကွက်ဂျာနယ်က သူ့ဆောင်းပါးတွေ ကို စစဖတ်ချင်း ဗမာစာက သိပ်မချောလှ၊
စတုန်းက သူ့ဖခင်အကြောင်း ၂၂ နှစ်ကြာသုတေသနလုပ်ထားတာတွေကို အင်္ဂလိပ်ရေးတာ ဆရာ အောင်သင်းတိုက်တွန်းလို့ မြန်မာစာကြိုးစားရေးရင်း ခုတော့ ချောလို့။ အဆင်ပြေလို့ပါပဲ၊ နောက်… သူ့စာတွေမှာ ရိုးဂုဏ်တွေ တွေ့ရတာ စိတ်ချမ်းမြေ့စရာ။
သုတေသနစလုပ်ပြီး ၂၃ နှစ်အကြာမှာ ဖေဖေဗိုလ်လကျ်ာစာအုပ်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေနိုင်ပြီး ၂၀၁၂ မှာ အမျိုးသားစာပေဆု- စာပဒေသာ ဆု ဆွတ်ခူးတာကလည်း ခေတ်အပြောင်းမှာ စာပေဆုကို ဖြုဖြူစင်စင်နဲ့ ထိုက်ထိုက်တန်တန်ရတာပါပဲလို့ ဆိုချင်မိ-
စစ်အစိုးရခေတ်မှာ ဗိုလ်လကျ်ာနဲ့ ဗိုလ်ကျော်ဇော အကြောင်း စိစစ်ရေးက ပိတ်ဆိုတော့- ပြည့်ပြည့်စုံစုံ မဖတ်ရ၊ ဒါကို ဒေါက်တာခင်လကျ်ာက ကွက်လပ်ဖြည့်ပေးလိုက်တာပါပဲ။ မဆလ ခေတ်ပြည်ပထွက်ခွင့်ပေးချိန်က ပြန်လာရင် ဆရာဝန်မလုပ်ရဘူး ကန့် သတ်ခံခဲ့ရပေမဲ့ ခင်လကျ်ာက ခင်လကျ်ာ။ ဒေါက်တာခင်လကျ်ာ၊ ဆရာဝန်က ဆရာဝန်၊ ဖခင်ကို အခြေပြုလို့ မြန်မာ့ သမိုင်းမှန်ကို ပြုစုလေသူ။
ဒီလိုပြုစုနိုင်ဖို့ မိခင်ရဲ့ အစုအဆောင်းက အားကောင်းစေတာလည်း အမှန်၊ ဘာမှတ်တမ်းဖြစ်ဖြစ်၊ ဓာတ်ပုံဖြစ်ဖြစ် မိခင်က စုဆောင်းထားတာမို့ မိခင်ရဲ့ ရည်ညွှန်းစာကြည့်တိုက်ကို အားကိုးနိုင်တဲ့ အတွက် အချက်အလက်လည်းခိုင်မာ၊ အထောက်အထားတွေလည်းပြည့်စုံတာမို့ မြန်မာ့သမိုင်းအတွက် အရေးကြီးတဲ့ အဖိုတန်စာတွေ ဖန်တီးနိုင်တပါပဲ။
သူ ရန်ကုန်ပြန်ရောက်ချိန်ဟာ အလုပ်ကအနားယူချိန်။ ဆေးမကုရလည်း ကိစ္စမရှိ၊ တသက်လုံးလည်း ဆေးပညာနဲ့ လူသားအကျိုးဆောင်ကြဉ်းပေးခဲ့ပြီ၊ ဖခင်ကို အခြေပြုလို့ မြန်မာ့ သမိုင်း မှန်ကူ တကွက်နှစ်ကွက်မက ဖြည့်ပြီးပြီ၊
ထပ်ဖြည့်ဖို့။ ဒါမှမဟုတ် ပင်လယ်ရပ်ခြားတာဝန်ထမ်းခဲ့တဲ့ သူတကာနဲ့ မတူတဲ့ သူ့ဘဝအတွေ့အကြုံတွေကို စာရေးရုံ။ ပြီး …. စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာအားကောင်းသလောက် ကျန်းမာရေးက ဒေါင်ဒေါင်မမြည်နိုင်တော့ပြီ။ အရိုးအဆစ်တွေက နဂိုအတိုင်း မလှုပ်ရှားနိုင်တော့ပြီ။
ကုလသမဂ္ဂဝန်ထမ်းအဖြစ် အာဖရိကတနိုင်ငံတာဝန်ထမ်းဆောင်တုန်း သူစီးလာတဲ့ ကားက ကျွမ်းသုံးပတ်လည်မှောက်ချိန်မှာ ရခဲ့တဲ့ ခြေထောက်ဒဏ်ရာက ခု အသက်ထောက်လာချိန်မှာ ဒုက္ခကပေးနေပြန်။
ဒါပေမဲ့ သူ့ဆောင်ပုဒ်- I must do, Iwill do, I can do ငါလုပ်ရမယ်။ ငါလုပ်မယ်။ ငါလုပ်နိုင်တယ် ထုံး နဲ့ အခက်အခဲတွေ၊ ဆူးညှောင့်တွေ၊ ခလုတ်တွေ၊ ဖိနှိပ်ခံရတာတွေကို ရဲရဲရင်ဆိုင်ပြီး လုပ်ချင်၊ လုပ်သင့်၊လုပ်ရမယ့်အရာတွေ ကိုသူလုပ်မြဲ၊ အောင်အောင်မြင်မြင်လုပ်နိုင်တာကို သက်သေလည်း အထင်အရှား။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှစ်နှစ်သမီးမှာ ဖခင်ကွယ်လွန်သွားပြီး ဗိုလ်ချုပ်အကြောင်း သုတေသန လုပ်မယ်ဆို ဖတ်စရာမှတ်စရာ စာအုပ်စာတမ်းတွေရှိ၊ မေးစရာမြန်းစရာ မိခင်နဲ့ဆွေမျိုးတွေရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ဖခင်အကြောင်း စာတစောင်ပေတဖွဲ့မက ပြုစုနိုင်ခဲ့ပါပြီ။
ဒေါက်တာလှကျော်ဇောဆိုရင်လည်း ဖခင်ကွယ်လွန်ချိန်ထိ အနီးကပ်အတူနေလာတဲ့ အပြင် ဗိုလ်မှူးချုပ်ဟောင်းကျော်ဇောကိုယ်တိုင်ရေးအတ္တုပ္ပတိပေါင်းချုပ်လည်း ရှိရုံမက အဲဒိပေါင်းချုပ်မှာ မပါသေးတာတွေကို ဆက်ရေးနိုင်သူပါ။
ဒေါက်တာခင်လကျ်ာကတော့ အရင်က မသိရတဲ့ ရဲဘော်သုံးကျိပ် အကြောင်းနဲ့ သူ့ဖခင်အကြောင်း အပတ်တကုတ်လုံ့လထုတ်ကြိုးစား ရေးသားသူရယ်။
ဒီ သုံးယောက်ထဲ သူဟာ နိုင်ငံရေးလောကထဲ ဝင်လာသူလည်း မဟုတ်၊
ရဲဘော်သုံးကျိပ်ဝင် သမီးသုံးယောက်- ဖခင်နံမည်နဲ့တွဲထားတဲ့နံမည်ရင်းနဲ့ စာရေးသူ သုံးယောက်-
သုံးယောက်စလုံး ပြည်ပမှာ အခြေချဖူးသူတွေနဲ့ ပြည်ပမှာ ရောက်နေသူ၊
သိတဲ့အတိုင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ အင်္ဂလန်ကနေ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး လောကထဲဝင်လာသူ၊
ဒေါက်တာခင်လကျ်ာကတော့ ပြည်ပမှာ အလုပ်လုပ်ကိုင်ပြီး အနားယူချိန်မှာ တိုင်းပြည်ပြန်လာသူ၊
ဒေါက်တာလှကျော်ဇောကတော့ လူနာတွေ အားကိုးရတဲ့ အစိုးရဝန်ထမ်းဆရာဝန်ဘဝကနေ ဖခင်နဲ့ တရုတ်နိုင်ငံရောက်သွားပြီး ပြည်ပမှာပဲ အခြေချနေထိုင်နေသူ။
ဒီ သုံးယောက်မှာ ဒေါက်တာခင်လကျ်ာနဲ့ ဒေါက်တာလှကျော်ဇောတို့က အချိန်ပြည့်စာရေးနိုင်ချိန်မှာ ... ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အချိန်ပြည့်မရေးနိုင်၊ သူကသာအချိန်ပြည့်မရေးနိုင်- သတင်းတွေမှာ သူ့နံမည်က မပြတ်၊ အကောင်းတော့မဟုတ်၊
ပြောရရင်- သူ့ကို ကမ္ဘာ့သတင်းတွေက ဝေဖန်ပုတ်ခတ်နေတာဟာ ရှစ်လေးလုံးအပြီး နေအိမ် အကျယ်ချုပ်ကာလမှာ ပြည်တွင်းက အစိုးရသတင်းစာတွေက တိုက်ခိုက်တာကို ပြန်ပြောင်း သတိရစေတာအမှန်။
စမ်းစမ်းတင် - ရဲဘော်သုံးကျိပ်ဝင် သမီးစာရေးဆရာမ သုံးယောက် Reviewed by MoeMaKa on 10:55 AM Rating: 5